मधेशीसँग विभेद कि रंगभेद ? – KalaiyaLive.Com.Np
कलैयालाईभ ४ आश्विन २०७५, बिहीबार १८:२०
— रामसुकुल मण्डल
‘नेपालमा मधेशीसँग विभेद छैन’ भन्छन् वास्तवमा हो पनि । मधेशीसँग विभेद होइन रंगभेद छ । छालाको रंग र बनावटको आधारमा मधेशीसँग व्यवहार गरिन्छ । नेपालको कुनै पनि कानून, ऐन वा संविधानको धारामा लेखिएको छैन कि मधेशीसँग विभेद गर्नुपर्छ तर रंग र अनुहारको आधारमा चरम विभेदको शिकार मधेशी समुदाय हुँदै आएका छन् । भनिन्छ, ‘नेपालको कानून दैवले जानून’ । तर, त्यस्तो होइन, मधेशीको हकमा दैवले होइन, शासकवर्गको नियतमा भर पर्छ । शासकवर्गले जहिले पनि मधेशीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा व्यवहार गर्दै आएका छन् । मधेशी अनुहार देख्ने बित्तिकै भारतीय जस्तो व्यवहार गरिन्छ । मधेश आन्दोलन पश्चात् मधेश र मधेशीको पहिचान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा स्थापित भइसकेको छ । तर विवश भएर मधेशीको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न परिरहेको छ शासकवर्गलाई ।
उनीहरूले प्रश्न सोध्न सक्ने भनेर आशंकाकै आधारमा बाहिर बोलाएर पक्राउ गरिएको गठबन्धनले जनाएको छ । सोही क्रममा पक्राउ भएका मध्ये हरपाल सिंह, इरफान शेख र राजितराम वर्मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बर्दियाको हिरासत गुलरियामै रहेका छन् । यस भन्दा अगाडि, २०७२ साल चैत्र ६ गते नेपालगञ्जको महेन्द्रपार्कबाट समातेर यादव सहित ८ जनामाथि नेपाल सरकारले राज्यविप्लवको मुद्दा चलाएको थियो । सो मुद्दामाथि सुनुवाई गर्दै विशेष अदालतले २०७४ साल फाल्गुण ३ गते सफाई दिएको थियो । २०७३ साल मंसीर १० गते पनि स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनले नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको ’रंगभेदी दिवस’ को अवसरमा यादवलाई नेपाल प्रहरीले गिरफ्तार गरी मंसीर १२ गते मात्रै छोडेको थियो । २०७४ साल आषाढ़ २ गते पनि स्थानीय निर्वाचन अगाडि ‘नो भोट’ को प्रचारप्रसार गरेको आशंकामा यादवलाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । सो मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुरको आदेशमा असार १९ गते यादवलाई रिहा गरिएको थियो ।
मृत्यु कि हत्या
छानबिनका लागि चौतर्फी माग
हिरासतभित्र रहेका बेला कुनै नागरिकको मृत्यु हुनु मानवअधिकार विपरीत रहेको भन्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संघसंगठनहरूले माग गरेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, तराई मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एसियन ह्युमन राइट्स लगायतकाले घटनाको निन्दा गर्दै छानबिन गरी दोषीउपर कारबाहीको माग गरेका छन् । यसैगरी, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसदहरुले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मृत्युबारे छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग गरेका छन् । हिरासतमा मृत्यु हुनु आफैमा शंकास्पद छ भने शव परीक्षणसमेत नहुनुले सुरक्षा निकायप्रति आम जनताको धारणा कस्तो बन्दैछ विचारणीय प्रश्न छ ।
उपेन्द्र यादव किन मौन ?
अन्त्यमा, नेपालमा सबैका लागि कानून एक समाज हुनुपर्छ । कोही मधेशी वा गैरमधेशी हुँदैमा फरक–फरक कानून लागू हुनु हुँदैन । सबैले यदि यो देशका सबै नागरिकलाई एक समान अधिकार दिएको छ भने राम मनोहरका लागि मानव अधिकार छैन ? किन उसको आत्मालाई समेत बन्धक बनाइएको छ ? मृत्यु भएको दुई हप्ता बितिसक्दा पनि शप परीक्षण नहुनुले के संकेत गर्छ ? यस्ता प्रश्नहरु अहिले सर्वत्र चर्चा भइसकेको छ । सुरक्षा निकायको यातनाकै कारण राम मनोहर मृत्यु भएको भन्ने आशंका विश्वासमा परिणत हुँदैछ ।
सरकारलाई दिएको समर्थन बेकार भयो : महतो
गढीमाई मन्दिर संचालन तथा बिकास समितिको आजिवन सद्स्यता लिनेहरुको संख्या चार सय भन्दा बढी पुग्यो